ကြားသိရသမျှ Archives - Page2of 42 - Achawlaymyar
အသက် ၂၄ နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ လုံးဝ မလုပ်သင့်တော့တဲ့ အရာများ
February 20, 2021 by Achawlaymyar
အသက် ၂၄ နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ လုံးဝ မလုပ်သင့်တော့တဲ့ အရာများ သင်ဟာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ မွေးသူတစ်ဦးဆိုရင် ဒီနှစ်ထဲမှာ ၂၅ နှစ်ပြည့်မှာဖြစ်ပြီး ၉၃ အောက်မွေးသူတွေကတော့ ၂၅ ကျော်သွားပါပြီ။ ဒီအရွယ်ဟာ လူငယ်လည်းမဟုတ်တော့သလို၊ လူကြီးလည်းမဟုတ်ပေမယ့် လူလတ်ပိုင်းအရွယ်အစ ဖြစ်တာမို့ နေထိုင်မှုပုံစံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလေး အနည်းငယ် လိုအပ်လာပါပြီ။ ၁ – ဈေးပေါပေါအင်္ကျီတွေမဝယ်နဲ့တော့။ ဒီအရွယ်မှာ အများအားဖြင့် ဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့ အရွယ်အပိုင်းအခြား ဖြစ်နေပြီဖြစ်သလို ငယ်ငယ်တုန်းကလို ဈေးနည်းနည်းနဲ့ အထည်များများ ဝယ်တာမျိုး မလုပ်သင့်တော့ပါဘူး။ သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်၊ အသက်အရွယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ အဝတ်အစားမျိုးကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်သင့်သလို ခပ်ပေါပေါ အဝတ်အစားမျိုးထက် ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး ဝတ်လိုက်တာနဲ့ အဆင့်အတန်းတစ်ခုရှိတဲ့ ပုံစံမျိုးကို ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ၂ – ရည်းစားမရှုပ်နဲ့တော့။ … Read more
မျက်နှာပေါ်ရှိ မှဲ့များကိုကြည့်၍ ဗေဒင်တွက်ရအောင်
February 19, 2021 by Achawlaymyar
သင့်မျက်နှာပေါ်ရှိမှဲ့ကို အရင် ဆန်းစစ်ပါ။ ပြီးရင် သင့်မျက်နှာပေါ်ရှိ မှဲ့နေရာကို ပုံပါအတိုင်း အနီးစပ်ဆုံးနံပါတ်ကိုကြည့်ပြီး အမျိုးအစားပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပါ။ ထင်ရှားပြတ်သားပြီး တခုတည်းရှိသောမှဲ့ကိုသာ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရပါမယ်။ မျက်နှာပေါ်မှ အစက်အပြောက်များ၊ ဝက်ခြံ (သို့) မှဲ့သေးသေးကလေးများကို ထည့်မတွက်ရပါဘူး။ ကဲ- မှဲ့နေရာက သက်ဆိုင်… ရာအနေအထားမှာရှိတာသေချာရင် ဘယ်နံပါတ်ထဲ ပါဝင်နေမလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်။ နံပါတ် ၁မှ၃ ကလေးတယောက်လိုပဲ သင့်ရဲ့စိတ်ဟာ တခါတရံမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲ ပေါက်ကွဲလွယ်တယ်။ မွေးရာပါ တီထွင်ကြံဆဥာဏ်ရှိပြီး လွတ်လပ်ခွင့်ပြုထားပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် သင့်ရဲ့အထက်အရာရှိက သင့်ရဲ့တွေးခေါ်ဆန်းသစ်လုပ်ဆောင်ရည်ကို နှစ်သက်သဘောကျမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာရှိတဲ့မှဲ့ပိုင်ရှင်ဟာ သူများအလုပ်ကို လုပ်ရတာထက် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ ကံပါပြီး စီးပွားရေးမှာလည်း အောင်မြင်ထွန်းပေါက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ် ၄ သင်ဟာ စိတ်ကူးရသလို လုပ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို သူတပါးအပေါ်ကို လွှမ်းမိုးသွားအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး … Read more
အင်တာနက်များများမသုံးဘဲ ငွေဖြတ်ခံနေရပါသလား ၊ မဖြစ်အောင် ဒါတွေလုပ်ပါ…
February 16, 2021 by Achawlaymyar
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသုံးပြု သူတွေ အင်တာနက် ဘယ်လိုသုံးလိုက် တယ်။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု နှုန်းထား ကို တိကျစွာ သိရှိဖို့အပြင် အင် တာနက် သုံးစွဲချိန်တိုင်းမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု ပမာဏများအ တွင်းမှ ဒေတာများလျော့နည်းသွားခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးမပြုပေမဲ့ ဖုန်းဘီလ်တွေ ဖြတ်တောက်ခံရခြင်းတွေက ကင်းဝေးနိုင် စေဖို့ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရာတွင် မလိုလားအပ်ဘဲ ဒေတာများ ကုန်ဆုံးခြင်းမှ လျှော့ချနိုင်စေရေး နည်းလမ်း ၁၀ ချက် ၁။အလိုအလျောက် update ပြုလုပ် ခြင်းကို ပိတ်ထားပါ။ ဖုန်းအတွင်းမှ အလိုအလျောက် update ပြုလုပ်ခြင်းကို ပိတ်ထားရန် လို အပ်ြ ပီး ၄င်းက သင့်ဖုန်းအတွင်းမှ ဒေတာ တွေကို သင်သတ်မှတ်ထားသကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ အသုံး ပြုလိုက်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ ၂။ အပလီကေးရှင်းများကို … Read more
အငျတာနကျကွီး ပွနျပိတျသှားရငျတောငျ Facebook နဲ့တခွားapp တှပေါဆကျသုံးလို့ရတဲ့နညျး Test Succeeded (စမျးသပျအောငျမွငျပွီး)
February 15, 2021 by Achawlaymyar
အင်တာနက်ကြီး ပြန်ပိတ်သွားရင်တောင် Facebook နဲ့တခြားapp တွေပါဆက်သုံးလို့ရတဲ့နည်း………..Test Succeeded!! (စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီး) Test Succeeded!! (စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီး) Internet ပြန်ပိတ်သွားရင်တောင် Facebook အပါအဝင်တခြားappတွေပါဆက်သုံးလို့ရတဲ့နည်း။ Speedify ကမြန်မာပြည်မှာ Internet ပိတ်ဆို့မှုတွေကို Awareness ရတဲ့အတွက် အစိုးရက အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားချိန်မှာတောင် သူ့ရဲ့ App ကိုသုံးပြီး Internetအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။Download လုပ်ပြီးတာနဲ့ 50G free သုံးစွဲခွင့်ရှိပါတယ်။ ချွေတာသုံးဖို့လဲ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း Visa Master တွေပါပိတ်ပစ်ရင် ဝယ်မရမှာစိုးလို့ပါ။ 1. App ကို အရင် download ပါ 2. VPN ကိုပိတ်ပြီးမှ App ကိုဖွင့်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် download မလုပ်ခင်ထဲက ပိတ်ထားပါ။ iOS user တွေအတွက် … Read more
ဗုဒ္ဓကို ကြှနျတျော အရမျးလေးစားပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့….
February 14, 2021 by Achawlaymyar
ဗုဒ်ဓကို ကြှနျတျော အရမျးလေးစားပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဗုဒ်ဓဟာ ဒီကမ်ဘာကွီးကို သူပိုငျတယျလို့ မကွှားခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကိုကိုးကှယျရငျ…… ဆုလာဒျတှပေေးမယျလို့ မစညျးရုံးခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကိုမရှိခိုးရငျ၊ မကိုးကှယျရငျ…. ငရဲကိုပို့ပဈမယျလို့ မခွိမျးခွောကျခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကိုရှိခိုးခွငျးထကျ “စရဏပိုငျး ကောငျးမှနျခွငျးဟာ…..ပိုမွတျတယျလို့ ပွတျပွတျသားသား ပွောကွားခဲ့သူပါ။ “သူပွောတဲ့စကားတိုငျးကိုလညျးအလှယျတကူ မကျြစိမှိတျမယုံလိုကျပါနဲ့ “လို့ရဲရဲတောကျ ပွောကွားခဲ့သူပါ။ သူဟောကွားခဲ့တဲ့ ဒီအမှနျတရားတှဟော သူပိုငျတာ မဟုတျပါဘူး။ သဘာဝအမှနျတရားတှေ သာဖွဈတယျလို့ ပျေါပျေါတငျပျေါပွောကွားခဲ့သူပါ။ သူရရှိခဲ့တဲ့ ဘုရားအဖွဈကိုလညျးသူတဈယောကျတညျးမောငျပိုငျစီးထားတာမြိုးမ ဟုတျဘဲ” “ဘုရားဖွဈခငျြရငျ ……… လူသားတိုငျး ကွိုးစားလို့ရတယျ “ဆိုတဲ့လမျးကွောငျးတဈခုကိုစိတျသဘောထား ကွီးမွတျစှာနဲ့ ခပြွခဲ့သူပါ။ လှပျလပျစှာ တှေးချေါခှငျ့၊လှတျလပျစှာ ပွောဆိုနထေိုငျခှငျ့၊လှတျလပျစှာ ယုံကွညျခှငျ့ ဆိုတဲ့ “ဒီမိုကရစေီ “သဘောတရားတှကေိုပွောကွားခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးသော.. ဘာသာရေးခေါငျးဆောငျ တဈယောကျပါ။ “ကိုယျကောငျးတာလုပျရငျကောငျးကြိုးခံစားရမယျ……..။ မကောငျးတာလုပျရငျမကောငျးကြိုးခံစားရမယျ……။” *မိမိရဲ့ကောငျးခွငျး၊ ဆိုးခွငျး … Read more
ပိုက်ဆံ မက်ပြီး အသက် (၆၀) ကျော်ကို ယူလိုက်တဲ့ အသက်(၂၀) အရွယ် မိန်းမပျိုလေးရဲ့ အဖြစ်ဆိုး…
February 13, 2021 by Achawlaymyar
ပိုက်ဆံ မက်ပြီး အသက် (၆၀) ကျော်ကို ယူလိုက်တဲ့ အသက်(၂၀) အရွယ် မိန်းမပျိုလေးရဲ့ အဖြစ်ဆိုး ပိုက်ဆံမက်ပြီး အသက် ၆၀ ကျော်ကိုယူလိုက်တဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ်မိန်းမပျိုလေး ရဲ့ အဖြစ်ဆိုပိုက် ဆံမက် တဲ့ အသက် ၂၀အရွယ်မိန်း ကလေးတစ်ယောက်ဟာ အသက် ၆၀ ကျော်သူဌေးကြီးနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ပါတယ် တစ်ပါတ်လောက်နေတော့ ကျောင်းနေ ဘက်သူငယ်ချင်းက အခြေအနေ သိချင်လို့ ဖုန်းဆက်ပြီး စပ်စုကြည့်တယ်။“သူငယ်ချင်း အခြေ အနေ ဘယ်လိုနေလဲ? ဘဲကြီးက အသက်ကြီးတော့ ညည်း သက်သာမှာပေါ့နော်”“ပြောချင်ပါဘူးအေ ငါ့အဖြစ် ကိုသိချင်ရင် MAI _ Yangon _ Bangkok လေကြောင်း လိုင်းသာ မေးကြည့်ပါတော့” သူငယ်ချင်းက MAI ရုံး … Read more
နပေူကွီးထဲမှာတဈနကေုနျလှုပျရှားနကွေတဲ့ လူအုပျကွီးကို တတျနိုငျသလောကျကူညီခဲ့တဲ့ ဦးကြျောသူ
February 12, 2021 by Achawlaymyar
အကယျဒမီကြျောသူကတော့ တဈခတျေတဈခါကတညျးက အနုပညာအလုပျတှကေို တစိုကျမကျမကျလုပျဆောငျခဲ့တာဖွဈပွီး အခုခြိနျမှာတော့ ပရဟိတအလုပျတှကေိုသာစှမျးဆောငျနတောဖွဈပါတယျ။ ဦးကြျောသူက နာရေးကူညီမှုအသငျး(ရနျကုနျ)ရဲ့ ဥက်ကဌဖွဈပွီး နာရေးလမျးကွောငျးတှကေိုလညျး ကိုယျတိုငျပို့ဆောငျပေးနေ တာဖွဈပါတယျ။ ဦးကြျောသူရဲ့စိတျဓာတျကို အနုပညာရှငျတခြို့နဲ့ပရိသတျတှကေပါ လေးစားပွီး အမွဲခဈြနကွေတာဖွဈပါတယျနျော။ ဦးကြျောသူကတော့ အသကျအရှယျတဈခုကိုရောကျရှိလာပမေယျ့ သှကျလကျဖကျြလကျပွီး သနျမာနဆေဲပဲဖွဈပါတယျ။ ဦးကြျောသူက လတျတလောဖွဈပျေါနတေဲ့အခွအေနမှောဆိုရငျလညျး ပွညျသူတှဘေကျကနေ ခိုငျခိုငျမာမာရပျတညျပွီး ကိုယျ စှမျးရှိသလောကျ ကူညီပေးနတောဖွဈပါတယျနျော ဦးကြျောသူကလညျး အနာဂတျလူငယျတှအေတှကျ တဈဖကျတဈလမျးကနေ အားကွိုးမာနျတကျ ပါဝငျလှုပျရှားနတော ဖွဈပါတယျ။ဦးကြျောသူကတော့ပရဟိတအလုပျတှကေိုလညျး မပကျြမကှကျလုပျဆောငျသလို လမျးမပျေါထှကျပွီးတော့လညျး ပွညျသူလူထုကိုဖေးမကူညီပေးနတောဖွဈပါတယျနျော။ အခုဆိုရငျတော့ ဦးကြျောသူက”ပွညျသူနဲ့ ထပျတူ နံနကျပိုငျး နာကူလမျးကွောငျးနှဈကွောငျး ကုသိုလျယူဖေးမအပွီး နလေ့ညျပိုငျး ပငျလုံရငျပွငျမှာ ဓါတျဆားထုတျမြား၊ သောကျရသေနျ့မြား၊ရှူဆေးကဒျမြားအား ပွညျသူလူထုအတှကျ၊ကြောငျးသား/သူ လူငယျ ခေါငျးဆောငျမြားအတှကျ သှားရောကျ လှူဒါနျး ဂါရဝပွုခဲ့ပါသညျ။ ”ဆိုပွီးရေးသားမြှဝလောတာဖွဈပါတယျ။ဦးကြျောသူကတော့ ပွညျသူတှကေို စိတျဓာတျခှနျအားပွညျ့သှားအောငျလို့ … Read more
မနညေ့ ၈နာရီကြျောကြျောလောကျက သင်ျကနျးခွုံထားတဲ့ ကိုရငျလေးက ခြိုစိမျ့နဲ့ ပဲနံပွားပါဆယျဆှဲပွီး သင်ျခြိုငျးကုနျးထဲ ဝငျခိုငျးတယျဗြာ…
February 11, 2021 by Achawlaymyar
မနေ့ည ၈နာရီကျော်ကျော်လောက်က ကျနော်လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့ သောက်နေကျ ဆိုင်ထဲကို ဝင်လိုက်တယ်….. ထိုင်ခုံက မရှိတော့ ကိုရင်လေး ထိုငိနေတဲ့ စားပွဲမှာပဲ ဝင်ထိုင်လိုက်တယ် စားပွဲထိုးကောင်မလေးက ကျနော့်အတွက် …. လက်ဖက်ရည်ခွက် ချပေးနေတုန်း ကိုရင်လေးက မေးလိုက်တယ်…. ဒကာမလေးးကိုရင် မှာထားတာ ကြာပီလေ မရသေးဘူးးလား တဲ့….. ကျနော်လည်းးမနေနိုင် မထိုင်နိုင် မေးလိုက်မိတယ်…. ကိုရင်က ဘာမှာထားတာလဲ လို့….. ချိုစိမ့်နဲ့ ပဲနံပြား မှာထားတာ….. အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်းးပြန်မေးလိုက်တယ်….. ကိုရင်က ဒီအချိန်စားလို့မရဘူးလေ ဆိုတော့…. မဟုတ်ဘူးးအမေ့အတွက်တဲ့….. အခုထိ မရသေးဘူးး အမေကမျှော်နေတော့မှာပဲ…. သူက ပြန်ဖြေတော့… ကျနော်သောက်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဖိုးရယ် ကိုရင် ဟာရယ် ပေါင်းရှင်းလိုက်တယ်….. ပြီးတော့ တပည့်တော် ကိုရင့်အမေဆီကို လိုက်ပို့ပေးပါ့မယ် ….. တပည့်တော်မှာ … Read more
မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ကမ္ဘာမကြေဘူး စာသားကို ယနေ့ တက်တူးထိုးသူ ၁၅၀ခန့်ရှိ
မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ယနေ့ ကမ္ဘာမကြေဘူး စာသားကို တက်တူးထိုးသူ ၁၅၀ခန့်ရှိ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင်း ယနေ့ “ကမ္ဘာမကြေဘူး” စာသား တက်တူး ထိုးသူ ( ၁၅၀) ခန့်ရှိ။ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင်း ယနေ့ “ကမ္ဘာမကြေ”ဘူး စာသားအား တက်တူး(ဆေးမင်ကြောင်)ထိုးသူလူဦးရေ (၁၅၀) ခန့် ရှိကြောင်းသိရသည်။ ရန်ကုန်မြို့ တက်တူးအဖွဲ့မှ ကမ်ပိန်းအနေဖြင့် “ကမ္ဘာမကြေဘူး”စာသားအား ယနေ့ ထိုးပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (မြစ်ကြီးနားတက်တူးဖန်များ) မှလည်း ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြပြီး အခမဲ့ထိုးပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Photo – Soe Htike MKA Tattoo Studio.crd. Unicode Version မွဈကွီးနားမွို့တှငျ ယနေ့ ကမ်ဘာမကွဘေူး စာသားကို တကျတူးထိုးသူ ၁၅ဝခနျ့ရှိ မွဈကွီးနားမွို့တှငျး ယနေ့ “ကမ်ဘာမကွဘေူး” စာသား တကျတူး ထိုးသူ ( … Read more
ခန်ဓာကိုယျမှာ လိပျပွာတှလောနားရငျ သတိထားပါ
February 3, 2021 by Achawlaymyar
အရောငျအဆငျးအမြိုးမြိုးရှိပွီး ခဈြစရာအသှငျရှိကွတဲ့လိပျပွာလေးတှေ ပနျးလေးတှပေျေါဝဲပြံနတောကိုမွငျရတဲ့အခါ မကွညျနူးတဲ့လူရယျလို့မရှိပါဘူး။ လူတျောတျောမြားမြားကလိပျပွာတှဟော ပနျးဝတျရညျကိုသာစုပျယူစားသုံးတယျလို့သိကွတာပါအမှနျတော့ လိပျပွာမဖွဈခငျ ခူကောငျဘဝမှာ သဈပငျကအရှကျတှကေိုစားပွီးကွီးပွငျးခဲ့ကွပွီး လိပျပွာဘဝမှာ ပုရှကျဆိတျငယျတှေ ပိုးမှားတှနေဲ့ ပုပျသိုးဆှေးမွနေ့တေဲ့တိရိစ်ဆာနျ တှေ ၊ အသီးအရှကျတှကေိုသာမက တိရိစ်ဆာနျ တှရေဲ့မစငျအပျေါမှာပါ နားခိုပွီးစားသုံးကွတယျလို့သိရပါတယျ လိပျပွာတဈကောငျရဲ့ကြောကျဖွဈရုပျကွှငျးဟာ နှဈပေါငျး ၅၆သနျးနဲ့ခြီပွီးဖွဈတညျနိုငျပါတယျလိပျပွာတှဟော ပနျးဝတျရညျတှကေိုစုပျယူစားသုံးပမေယျ့ သူတို့အတှကျအာဟာရမလုံလောကျတဲ့အခါ အခွားနရောတှကေနေ ဆားဓာတျရရှိဖို့ စုပျယူကွတယျလို့သိရပါတယျ ဒါ့ကွောငျ့ လိပျပွာလေးတဈကောငျ ကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျပျေါလာနားနပွေီဆိုရငျတော့ သတိထားဖို့လိုပါတယျဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သူ တို့ဟာ ဆားဓာတျလိုခငျြတဲ့အတှကျ ကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျအတှငျး ခြှေးတှေ သှေး ထဲကနတေဈဆငျ့ ဆိုဒီယမျကိုစုပျယူခငျြတာ ဖွဈနိုငျတာကွောငျ့ပါ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလိုစုပျယူခြိနျမှာ သူ့ရဲ့သေးငယျတဲ့ဝတျရညျစုပျတံကွောငျ့ သငျဘယျလိုမှခံစားရမှာမဟုတျတဲ့အပွငျ ပနျးလေးတှပေျေါမှာပဲ ဝဝေဲ့လရှေိ့တဲ့လိပျပွာလေးတှကေ သငျ့ဆီမှာလာရောကျခိုနားတဲ့အတှကျ သငျဝမျးသာနမေိမှာအမှနျပါပဲ။ ရှရေောငျလမျး ( Writer – LLA ) Photo … Read more